Fivorian'ny FJKM Synodam-paritany Antananarivo Atsinanana eny Ambatomanga – FJKM Ambavahadimitafo Fivorian'ny FJKM Synodam-paritany Antananarivo Atsinanana eny Ambatomanga |
Fivorian'ny FJKM Synodam-paritany Antananarivo Atsinanana eny Ambatomanga
Fivoriam-be isan-taona ny alakammisy 23 Jolay 2009 tanterahina ao amin’ny FJKM Ambatomanga Fiderana manomboka amin’ny 9h30 maraina. Tompon’anjara amin’ny fanompoam-pivavahana :
– mitarika : ny biraon’ny synodam-paritany,
– mivavaka sy mamaky ny soratra masina: ny firahalahian’ny mpitandrina,
– mitory ny tenin’Andriamanitra: Foibe FJKM,
Hotanterahina amin’io fotoana io ny Alahadin’ny Président Synodaly mianakavy, fitondràna am-bavaka sy fanohanana an’izy ireo ka hanentanana ireo fiangonana tsirairay fa atolotra eo izay ezaka vitantsika eto am-piangonana tamin’ny 19 Jolay lasa teo.
Hisy koa ny fiarahabana an’ireo mpiasa vaovao tsy vita tamin’ny fivoriam-be santatra koa aza adinoina ireto : baiboly sy fihirana ary fitaovam-pihinanana, hitondra am-bavaka an’io fotoan-dehibe io isika mba ahalavorary izany.
Fanentanana manokana antsika fiangonana sy sampana mba hanatrika izany satria isika dia ao anatin’ny synodam-paritany.
Hisy fiara hitondra antsika mandroso sy miverina ka hiainga eo amin’ny esplanade Analakely eo am-pitan’ny Foibe FJKM amin’ny 8 ora maraina, koa izay maniry hande amin’izany fotoana izany dia manatona ao amin’ny biraon’ny fandraharana.